"Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray." Romana 5:18
Raha mamoa paiso iray monja ny hazo, dia fantatra mazava fa hazo paiso izy io. Toy izany koa, tsy ilaina manao zava-dratsy maro ny olona, vao hambaran'Andriamanitra hoe mpanota. Na dia indray mandeha monja aza isika no tsy nankatò Azy, dia efa porofo izany fa mpanota sy meloka isika. Didim-pitsarana mampivarahontsana! Ratsy ilay hazo.
Heverintsika indraindray fa hanala tsiny antsika eo anatrehan'Andriamanitra ny asa tsara ataontsika, heverintsika fa toy ny fisainantsika ny fisainan'Andriamanitra, ka hoe zavatra tsara maro (heverintsika hoe nataontsika) dia mahonitra ratsy kely. Tsy toy izany anefa no ataon'Andriamanitra. Masina sy marina Izy, ka ny asa vitsivitsy toa mendri-piderana vitantsika dia tsy hampitony ny hatezerany noho izay ratsy rehetra nataontsika. Tsia, fa Andriamanitra dia manolotra famelan-keloka ho an'ireo rehetra miaiky fa mpanota. Tsy misy hafa, satria efa samy tsy nankatò an'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra; tsy misy hafa ihany koa ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho an'ny olon-drehetra tsy ankanavaka.
Nahoana moa no afaka mamela heloka maimaimpoana Andriamanitra, Izay nanambara fa hofaizina avokoa ny ratsy rehetra vita? Satria efa nisy Olona iray nisolo antsika, niharan'io famaizana io, dia Jesosy Kristy, Ilay Zanak'Andriamanitra. Tonga tety; an-tany Izy, niaina teto ary tsy nisaina na niteny na nanao ratsy. Nefa dia nolavin'ireo mpiara-belona taminy Izy ary nohelohiny ho faty. Nokapohin'Andriamanitra i Jesosy, nofaizina nisolo antsika, nisolo ahy. Fitiavana manao ahoana loatra moa ny an'Ilay Andriamanitra nanao sorona an'i Jesosy, ho antsika! Lehibe indrindra ny fitiavan'i Jesosy, Izay nanolotra ny tenany mba hofaizina teo amin'ny toerantsika! Ho ahy, ho anao io famotsoran-keloka omen'Andriamanitra io, raha raisina tsotra am-pinoana.